Izindaba - Stuger Yuancheng: Woza futhi
Ngo-Okthoba 15, i-126th Canton Fair yaqala njengoba bekuhleliwe. I-Yuancheng Auto Accessories Manufacturer CO., LTD ibonakale ukubukeka okusha sha ngomugqa wo mkhiqizo wenoveli.
Umbala omusha oshintsha umbala womthunzi welanga nochungechunge lwesembozo samasondo esiteringini, abathengisi abahamba phambili bezitayela zakudala zelanga, uchungechunge olusha lwemoto esiqandisini, uchungechunge lwetende lwetende olusefashinini, njll.
Ukufaka idokodo le Yuancheng, uzobona indawo engaphandle yomkhiqizo lapho kufakwa khona amafriji emoto yenoveli. Emnyango kunemodeli yetende ezenzakalelayo eheha izivakashi. Okulandelayo endaweni yomkhiqizo ongaphandle indawo yemikhiqizo yangaphakathi emotweni. Abathengisi abaningana bakhombisa imisebenzi yamakhasimende yemikhiqizo.
Esigabeni 1, izivakashi zikubalule kakhulu ukusebenza okuphezulu nokwethembeka kwesiqandisi semoto i-Yuancheng. Imikhiqizo yangaphakathi efana nesihlangu selanga nekhava yesondo lokushayela yenziwa ngendwangu yonwabu eletha umphumela omibalabala okhazimulayo ngaphansi kwethonya lokukhanya noma lokushisa. Lo ngumkhiqizo wendabuko osobala, kepha iYuancheng iyenza ikhanye ngokuklama okuhlukile.
Esigabeni sesi-3, u-Yuancheng ukhombise itende elithuthukisiwe kusetshenziswa indwangu entsha ephefumula, elula ne-UV, enesisindo esilula futhi esebenza kangcono. Ngaphezu kwalokho, uYuancheng ubambe impendulo yokumaketha ngokushesha futhi yathuthukisa isipiliyoni sabathengi ngokwenza ukulungiswa ewindini letende.
Ngemikhiqizo emisha yethulwe, u-Yuancheng wazuza ukuthandwa okuphezulu kule Canton Fair. Idokodo likaYuancheng belihlale liminyene futhi imikhiqizo ibisaziwa kakhulu, iheha amakhasimende amasha namadala ukuthi eze ezingxoxweni nasekuxhumaneni.
"Ngokuzayo, sizoqhubeka nokusebenza ngokuzikhandla futhi siqhubeke nokutshala imali ku-R & D, futhi silwele ukuba ngumkhiqizo womhlaba wonke wezokuvakasha zangaphakathi nezangaphandle zezimoto kanye nemikhiqizo yezokungcebeleka.", Ngokusho kukaXu Mengfei, umongameli waseYuancheng.
12v Car seziqa Cooler, Imoto Epholile, IMako Car Cooler, Itende Lezimoto Elidumile, Vala Ngaphansi Kwemoto, Ephathekayo Car Cooler 12v,